Virtualbox | November 2019
Chọpụta ma hazie ọdụ ụgbọ mmiri na VirtualBox
Editor Si NhọRọ November 15,2019
Esi tinye ma hazie VirtualBox
Ịwụnye VirtualBox na-ejighị oge dị ukwuu ma ọ dịghị achọ nkà ọ bụla. Ihe niile na-eme na ọnọdụ ntụle. Taa, anyị wụnye VirtualBox wee jee ije n'usoro ihe omume ụwa. Download VirtualBox Installation 1. Gbaa faịlụ ndị a ebudatara VirtualBox-4.3.12-93733-Win.exe. Mgbe mmalite, njikwa nwụnye na - egosipụta aha na mbipute ngwa ahụ.
Ịwụnye gam akporo na VirtualBox
Site na VirtualBox, ị nwere ike ịmepụta igwefoto arụmọrụ na ọtụtụ ụdị sistemụ, ọbụna na mobile gam akporo. N'isiokwu a, ị ga-amụta otú ị ga-esi wụnye ọhụrụ nke gam akporo dị ka os os os. Hụkwa: Ịwụnye, iji na configuring VirtualBox Nbudata foto gam akporo Na mbido mbụ, ịwụnye gam akporo na igwe arụmọrụ agaghị ekwe omume, ndị mmepe onwe ha enyeghị ha nsụgharị ported maka PC.
Ịmepụta nchekwa ndị dị na VirtualBox
Maka nlekota nlekota nke oma nke osiri oma na oma na VirtualBox, o bu ike ime ka nchekwa nchekwa. Ha na-esitekwa n'aka ndị ọbịa na usoro ndị ọbịa na-esite ha ka ha wee nwee ike ịgbanwe data n'etiti ha. Ikekọrịta nchekwa na VirtualBox Site na-akọrọ nchekwa, onye ọrụ ahụ nwere ike ịlele ma jiri faịlụ echekwara na mpaghara ọ bụghị naanị na igwe nnabata, kamakwa na ọbịa OS.
Ịwụnye PackBox Extension Pack
Nbudata nke VirtualBox Extension - Ngwadogwu tinye-ons nke na-agbakwụnye atụmatụ na VirtualBox nke nwere nkwarụ site na ndabara. Download Oracle VM VirtualBox Extension Pack Na-enweghị isi na-enweghị isi, ka anyị malite nkwụnye ngwugwu. 1. Download. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ma budata faịlụ ngwugwu maka mbipute gị. Ị nwere ike ịchọta nsụgharị site na ịga na menu "Enyemaka - Banyere usoro ihe omume ahụ".
Nhazi Network na VirtualBox
Nhazi netwọk kwesịrị ekwesị na igwe arụmọrụ VirtualBox na-enye gị ohere ịmekọrịta otu ọrụ arụmọrụ na onye ọbịa maka mmekọrịta kachasị mma nke ikpeazụ. N'isiokwu a, anyị ga-ahazi netwọk na igwe arụmọrụ na-agba Windows 7. Configuring VirtualBox amalite site na ntinye nke njedebe ụwa.
CentOS bụ otu n'ime usoro ndị kachasị ewu ewu dabeere na Linux, ọ bụkwa n'ihi nke a ka ọtụtụ ndị ọkachamara chọrọ ịmara ya. Ịwụnye ya dịka sistemụ arụmọrụ nke abụọ na PC gị abụghị nhọrọ maka onye ọ bụla, ma ị nwere ike ịrụ ọrụ na ya na ebe a na-ahụ maka ebe a dịpụrụ adịpụ a na-akpọ VirtualBox.
Ịwụnye Linux na VirtualBox
Linux na-adọrọ mmasị ọtụtụ ndị ọrụ, mana ole na ole na-ekpebi ịgbanwe Windows na ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ghọtara ihe dị mkpa nke ọrụ nke ikpo okwu a, ị ga-ahụ na Windows abụghị naanị nhọrọ nwere ike ịhọrọ (karịsịa ịlele oke ego ya). Mbụ ị chọrọ ịghọta otú Linux si arụnyere na igwe arụmọrụ.
Mepụta ma hazie aha nchekwa na VirtualBox
Mgbe ị na - arụ ọrụ na igwe windo VirtualBox (ebe a - VB), ọ na - adịkarị mkpa iji gbanwee ozi dị n'etiti isi os na VM n'onwe ya. Enwere ike ịrụ ọrụ a site na iji nchekwa nchekwa. A na-eche na PC na-agba ọsọ Windows OS ma tinye osụ os os. Banyere nchekwa nchekwa Ndị nchekwa nke ụdị a na-enye mma nke ịrụ ọrụ na VirtualBox VM.
Esi tinye Windows XP na VirtualBox
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi etinye Windows XP dịka sistemụ arụmọrụ na-eji usoro VirtualBox. Hụkwa: Otu esi eji VirtualBox Ịmepụta igwefoto arụmọrụ maka Windows XP Tupu ịwụnye usoro, ị ga - emepụta igwe arụmọrụ maka ya - a ga - aghọta Windows ya dị ka kọmputa zuru ezu.
Esi tinye Windows 7 na VirtualBox
Ebe ọ bụ na anyị niile nwere mmasị ịnwale, gbanye n'ime usoro ntọala, na-eme ihe nke aka anyị, ịkwesiri iche banyere ebe dị nchebe iji nweta nnwale. Ebe dị otú a ga-abụ maka anyị VirtualBox mebere igwe na Windows 7. arụnyere. Mgbe ị malitere VirtualBox mebere igwe (nke a na-ezo aka dịka VB), onye ọrụ ahụ na-ahụ windo na interface zuru oke asụsụ Russian.
Nchịkọta ndị ọbịa VirtualBox (nchịkọta ọrụ sistemụ ndị ọbịa) bụ ngwugwu ndọtị nke na-etinye n'ime usoro ọrụ arụmọrụ ma na-eme ka ike ya maka ijikọta na mmekọrịta ya na onye ọbịa (ezigbo) OS. Dị ka ihe atụ, tinye-ons, ekwe ka ị jikọọ igwe arụmọrụ na ezigbo netwọk, na-enweghị ike ịgbanwe faịlụ site na ịmepụta nchekwa nchekwa, yana ịnweta Intaneti rụrụ arụ.
Ụzọ abụọ iji mepee ohere disk na VirtualBox
Mgbe ị na-ekepụta igwe arụmọrụ na VirtualBox, onye ọrụ ga-ezipụta ọnụahịa ọ chọrọ itinye maka mkpa nke os os. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọnụ ọgụgụ gigabytes nke oge a nwere ike ịkwụsị iji zuo oke, mgbe ahụ ajụjụ nke ịba ụba nchekwa nchekwa ga-aba uru.
Ntinye ntinye nke Kali Linux na VirtualBox
Kali Linux bụ nkesa nkesa nke a na-ekesa na free free na ụdị nke ihe oyiyi ISO na onyinyo maka igwe arụmọrụ. Ndị na-arụ ọrụ kọmputa na VirtualBox enweghị ike iji Kali dịka LiveCD / USB, kamakwa wụnye ya dịka usoro ọrụ arụ ọrụ. Na-akwadebe iji wụnye Kali Linux na VirtualBox Ọ bụrụ na ị wụnyebeghị VirtualBox (nke a na-ezo aka dịka VB), ị nwere ike ime nke a site na iji nduzi anyị.
Ịwụnye Ubuntu na VirtualBox
N'isiokwu a, anyị ga-elele anya iji wụnye Linux Ubuntu na VirtualBox, usoro ihe omume maka ịmepụta igwe arụmọrụ na kọmputa. Ịwụnye Ubuntu Linux na igwe ejiji igwe Nke a ga-enye aka na ụdị dị mfe iji nwalee usoro ịchọrọ, iwepu ọtụtụ mgbagwoju anya, gụnyere mkpa ịdegharịa isi os na disk disk.
Dezie njehie 0x80004005 na VirtualBox
Mgbe ị na-agbalị ịmepụta sistemụ arụmọrụ Windows ma ọ bụ Linux n'ime igwe arụmọrụ VirtualBox, onye ọrụ nwere ike izute njehie 0x80004005. Ọ na-eme tupu OS amalite ma gbochie ọ bụla igbanye ya. Enwere otutu ụzọ iji nyere aka wepụ nsogbu dị ugbu a ma nọgide na-eji usoro ọbịa dịka ọ dị na mbụ.
VirtualBox anaghị ahụ ngwaọrụ USB
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ha na-arụ ọrụ na VirtualBox na-eche nsogbu nke ijikọ ngwaọrụ USB na igwe arụmọrụ. Njirimara nsogbu a dị iche: site na nkwado enweghị nkwado maka onye nchịkwa tupu njehie ahụ "Emezughị iji jikọọ ngwaọrụ USB Amaghị ama maka igwe arụmọrụ."
VirtualBox amaliteghị: Ihe kpatara na Ngwọta
The VirtualBox toolkit bụ ike, ma ọ nwere ike ịkwụsị na-agba ọsọ n'ihi ụfọdụ ihe, ọ bụ na-ezighị ezi ọrụ ma ọ bụ melite nke sistemụ na igwe ụlọ ọrụ. Mmalite Mmalite nke VirtualBox: Isi Na-akpata ụdị dị iche iche nwere ike imetụta otú VirtualBox si arụ ọrụ.
A chọrọ ibufe ụgbọ mmiri gaa na igwe windo VirtualBox maka ịnweta ọrụ netwọk ndị os os sitere na isi mmalite. Nhọrọ a ka mma iji gbanwee ụdị njikọ na ọnọdụ akwa (akwa), n'ihi na onye ọrụ nwere ike ịhọrọ nke ọdụ ụgbọ mmiri ga-emepe na nke ga-ahapụ emechi.
VirtualBox bụ otu n'ime ihe kachasị ewu ewu software. Na-enye gị ohere ịmepụta igwemịkị rụọ ọrụ dị iche iche ma na-agba ọsọ usoro dị iche iche. Nnukwu maka ule software na usoro nchekwa, yana ịchọta ọhụụ os os. VirtualBox - kọmputa na kọmputa Nkeji edemede na VirtualBox.
Ịwụnye Ụda Omume na VirtualBox
Taa, ị ga-amụta otú ịmepụta igwemịkị maka igwefoto remix na VirtualBox ma wụnye sistemụ arụmọrụ a. Hụkwa: Otu esi eji VirtualBox Nzọụkwụ 1: Nbudata os os Remix osio n'efu maka nkwado 32/64-bit. Ị nwere ike ibudata ya site na saịtị ndị ọrụ na njikọ a.
Gbanyụọ SmartScreen Filter na Windows
Idozi nsogbu na "gbasaa olu" na Windows 7
BX Egwuregwu 6.2.7.5
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na vidio ahụ na ihe nchọgharị ahụ dị ntakịrị
Ndị ọrụ Facebook nwere ike ịchọta ugbu a site na nọmba ekwentị ejikọtara na akaụntụ, ebe netwọk mmekọrịta adịghị enye ike ịchekwa data dị na ntọala nzuzo. N'ihe a, n'ihe banyere onye kere akwụkwọ nkà ihe ọmụma bụ Emoji Emojipedia Jeremy Burge dere Techcrunch. Eziokwu ahụ bụ na netwọk ekwentị ndị ọrụ, na-emegide okwu ọkwa, dị mkpa site na netwọk mmekọrịta naanị maka ikike abụọ, ọ bịara mara na afọ gara aga. GụKwuo
Mmemme mmalite na Windows 7 - esi ewepụ, gbakwunye na ebee ka
Ebee ka nchekwa mmalite ahụ na Windows 10
https://termotools.com ig.termotools.com © Virtualbox 2019